गर्भवती भारती सिंहले अचानक मुम्बई स्थित आफ्नो घर किन छोडिन्? – PathivaraOnline
Home > बलिउड > गर्भवती भारती सिंहले अचानक मुम्बई स्थित आफ्नो घर किन छोडिन्?
गर्भवती भारती सिंहले अचानक मुम्बई स्थित आफ्नो घर किन छोडिन्?
admin January 14, 2022 बलिउड 0
एजेन्सी । भारतकी चर्चित अभिनेत्री भारती सिंहले अचानक आफ्नो मुम्बई स्थित घर छोडेकी छन् । उनी भर्खरै गर्भवती भएको खबर सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।
विवाह गरेको धेरै वर्ष पछि गर्भवती भएकी भारती निकै खुसी थिइन् । तर हालै उनले आफ्नो घर छोडेको खबर भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् । भारतमा अचानक कोभिडको तेस्रो लहरले महामारीको रुप लिएपछि भारतीले आफुलाई सुरक्षित राख्न मुम्बई स्थित घर छोडेकी हुन् ।
भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहाेस>>>
यति राम्री महिलाकाे काम चै यस्तो डरलाग्दो!… के गरिन् त्यस्तो?
नायिका ऐश्वर्या कार चढ्दै गर्दा फोटोग्राफरले गलत कोणबाट खिचेपछि….